Nhau - Chii Chinobatsira Iyo Carver Bimini Pamusoro Inounza?
Yakakosha Zuva Kudzivirirwa paMvura
Zvakarekunyanya kubatwa nezuva whuku iwe uri muchikepe chakashama zvinogona kukonzera kutsva kwakaipa.Nekuda kwenzira iyo mvura inotaridza chiedza chezuva pamuviri wako, zuva raunopinda muchikepe rakaipisisa kupfuura zuva raunowana uri panyika.
Nepo kuvhara neheti, zvipfeko zvakakodzera, uye kushandisa sunscreen zvichabatsira mukudzivirira kubva kune zuva, hazvizokupi iwe mumvuri uyo Bimini Top ichapa.
Chii chinonzi Bimini Pamusoro?
Carver Bimini Tops inokupa yakanakisa yekuvhara paunenge uchifamba nechikepe.
XGEAR Bimini Pamusoro chivharo ine furemu yesimbi inotsigira canvas yakavhurika kumativi,uchishandisa iyo 600D mhinduro yakadhayiwa jira rine kaviri rakaturikidzana rinonakira kusapinda mvura.Bimini Pamusoro pebhoti inovhara ine 1 inch aruminiyamu furemu ine mhando mbiri: modhi#1 ine 4 tambo dzinochinjika, modhi#2 chete nemabhandi maviri ekumberi anochinjika uye mapango maviri ekumashure.Zvakafanana neamburera ine makumbo mana anovhara chikamu chechikepe chako.
Bimini Tops inoita kuti kuzorora pamvura kuve nyore, saka unogona kurega kunetseka nezvekukuvadza ganda rako.Isu tinopa yepamusoro-ye-iyo-mutsara Bimini tops nezvinhu zvakanakisa muindasitiri.Kune akazara gumi mavara uye 7 akasiyana saizi yekusarudza.
Bimini Tops Inogadzirwa Sei?
XGEAR Bimini Pamusoro chivharos kuuya kureba kubva6'kuti8' refu uye ivo vanokwira muzvikepe kubva kudiki inflatable kuenda kune hombe kabhini cruisers.Carver Bimini Tops inouya yakajairwa ine aruminiyamu tubing uye naironi fittings.Uta hukuru hweBimini yedu yepamusoro yakapetwa kaviri, kuti ipe kugadzikana kwakawedzera.Zvishongedzo zvedu ndezvegiredhi repamusoro muindasitiri yeBimini.Iwe unogona kusarudza yako Bimini Yepamusoro saizi, kana iwe unogona kuenda neimwe yekurudziro yemugadziri wedu.Kuti usarudze saizi yako, isu tinongoda kuziva hupamhi pakati pemapoinzi ako ekukwira, kureba kubva painokwirisa kumusoro, uye kureba kwecanvas yaungade.
Isu tinogadzira ese edu ezvikepe zvivharo, mabimini epamusoro ezvikepe, uye isu tinokwanisa kuve nechokwadi zvirinani kunaka uye nekukasira kune edu ese eCarver Covers.
Nguva yekutumira: Mar-11-2022